कोरोना संक्रमितले भरिए काठमाडौंका कोभिड अस्पताल - Yessamachar
सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा मात्रै दैनिक सातदेखि १० जना भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ । संक्रमित आउने, तर भर्ना गर्ने बेड नहुँदा समस्या आउने देखिएको छ । उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्ने देखिएको छ । कसरी आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कसैको पनि ध्यानभएको देखिएन ।
करिब दुई महिना खाली भएका काठमाडौं उपत्यकाका कोभिड अस्पताल फेरि भरिएका छन् । उपत्यकामा दैनिक कोरोना संक्रमित बढ्न थालेको एक हप्तामै कोभिड संक्रमितको उपचार गर्न तोकिएका तीन अस्पताल भरिएका हुन् ।
कोभिड उपचारका लागि सरकारले उपत्यकामा टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र लगनखेलस्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई लेभल टु अस्पतालका रूपमा तोकेको छ । केही दिनयता उपत्यकामा कोभिड संक्रमित बढ्न थालेपछि तीन अस्पताल भरिएको जनाएको छ । टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीका अनुसार कोभिडका लागि तय भएका बेडहरू भरिएका छन् ।
सरकारले शंकास्पद व्यक्तिका लागि कीर्तिपुरको आयुर्वेद तालिम केन्द्र र भक्तपुरको खरिपाटी विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा एक हजार बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्ष बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, काम अघि नबढ्दा अब शंकास्पद व्यक्तिलाई राख्न कोभिड अस्पताललाई समस्या भएको छ । कोभिड चिकित्सक डा। अनुप बाँस्तोलाका अनुसार सरकारले शंकास्पद व्यक्तिको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए गम्भीर समस्या आउनेछ ।
चिकित्सकहरूले उपत्यकामा हिँड्डुलमा लापरबाही भइरहेकाले जोखिमको चेतावनी दिँदै आएका छन् । झन् तीनवटै अस्पताल भरिएपछि चिकित्सक पनि तनावमा छन् ।
‘टेकुमा मात्रै दैनिक सातदेखि १० जना भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ । संक्रमित आउने, तर भर्ना गर्ने बेड नहुँदा समस्या आउने देखिएको छ,’ डा. बाँस्तोलाले भने । अझ विदेशबाट ल्याएका मानिसलाई होटेलमा राखिएको बताए पनि कुन होटेलमा कसरी बसिरहेका छन् भन्ने कसैले ध्यान नदिएकाले जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।
टेकु अस्पतालमा आइसोलेसनका लागि एक सय बेड तय गरिएको भए पनि दूरी कायम गर्दा ३५ बेड मात्रै तयार भएका छन् । निर्देशक डा।राजभण्डारीका अनुसार आइसियू २० बेड, भेन्टिलेटर नौ, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी १० जना, एम्बुलेन्स एक, एक्सरे दुई र अत्याधुनिक सिटिस्क्यान एउटा छ । अहिले ३५ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने सातजना आइसियूमा भर्ना भएका छन् ।
त्यस्तै, पाटन अस्पताललाई सरकारले सुरुवाती दिनबाट कोभिड अस्पताल अर्थात् लेभल टु अस्पतालका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । ६ सय बेड रहेको पाटनमा संक्रमितका लागि ४५ बेड आइसोलेसन, शंकास्पदका लागि १५ बेड आइसोलेसन र आइसियू २१ बेड गरी ८१ बेड छुट्याएको छ । त्यस्तै, भेन्टिलेटर १५ छन् । अस्पतालका डा। आशिष श्रेष्ठले ८१ मध्ये संक्रमितका लागि राखिएको ४५ बेडको आइसोलेसनमा ४९ जना भर्ना छन् ।
त्यस्तै, शंकास्पद व्यक्ति राख्न बनाइएको १५ बेडको आइसोलेसनमा दोब्बर संक्रमित राखिएको छ । एउटा रुममा दुईजना संक्रमित राखिएको डा। श्रेष्ठले बताए । सोमबार मात्रै ४९ जना संक्रमित भर्ना भएका छन् । संक्रमितमध्ये चारजनालाई आइसियूमा भर्ना गरिएको छ । बेड अभाव हुँदा केहीलाई इमर्जेन्सीमा राखिएको छ । क्षमताभन्दा बढी संक्रमित आएपछि अस्पतालले एक सय वार्ड कोभिडका लागि खोल्ने तयारी गरेको जनाएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
Previous articleदेशभरको मौसममा बदली, यी ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
Next articleउत्पादक र उपभोक्ताबीच ६ तह बिचौलिया